Ikpokọt ọkpọ ọkpọkpọ efu na Blowinging
Archive si udi "Etu aka"
Wenezde, 08 Eprel 2020 by Cristina Maria Sunea
Ngwa eji eme ihe akpa
Ngwa a na-etinye akpa a bụ ezigbo kọmpat, nke dabara n'azụ akpa bagger. Ọ na - anabata akpa site na akpa ma na-efegharị ya elu. O nwere ọtụtụ ọnọdụ ọkwa. Na-echekwa na oru na ohere.
bipụtara Ibu akpa
Akpadoro n'okpuru: akpa, akpa akpa, ịchekwa ohere
Onye na-ebu ụzọ na-ebugharị ahụ na-eme ka ahịrị ghara inwe mgbochi micro akwụsị. Ọ na - edozi njigide okwu dịka akpachigharị akpịrị, enweghị atụ, nkwụsị ugboro ugboro. Na-abawanye arụmọrụ nke eriri nkwakọ ngwaahịa gị. You nwere ike ịgbanwee n'etiti izu na ntughari.
bipụtara Confeyo Buffer
Akpadoro n'okpuru: shrinkage, kwụsịrị ahịrị, akara dị mma, igbochi, mma, ịdebanye aha
Okpokoro echekwa - akpaka zuru ezu
Okpokoro echekwa na-eme ka ahịrị ahụ ghara ịkwụsị micro nkwụsị: nkwụsị na igwe mkpụcha, ndị na-ede akwụkwọ… Na-emewanye arụmọrụ nke akara nkwakọ ngwaahịa gị. Eji n'etiti igbu ịkpụzi & ndochi edoghi.
bipụtara Tebụl njikwa
Akpadoro n'okpuru: kwụsịrị ahịrị, akara dị mma, igbochi, ịdebanye aha